Ahoana no fomba hanaovana fitsangatsanganana an-dalamby na dia sariaka kokoa aza | Save A Train
Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > Ahoana no fomba hanaovana fitsangatsanganana an-dalamby na dia sariaka kokoa aza
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 24/10/2020)
Ny fitsangatsanganana lamasinina dia traikefa nahafinaritra izay manome valisoa am-polony. Ny lamasinina dia mitondra anao hanakaiky ny tontolo: tsy ho hitanao ny andian'ondry miompy na mifoka fofona saha tulip avy eo amin'ny seza afovoan'ny Airbus. Afaka mandefa anao any ivelany ireo lamasinina ary mametraka anao eo afovoan'ny tanàna amin'ny fotoana fohy. Afaka mivelatra sy miala sasatra ary mifampiresaka a elanelana ahazoana aina miaraka amin'ireo mpiara-dia aminao rehefa mitaingina ny lamasinina ianao. Ny sasany mety hilaza fa ny fitetezam-paritany dia valiny manokana satria isaky ny mitaingina lamasinina isika, manampy amin'ny fihazonana indostria tena ilaina sy lovantsofina mivelatra izahay. Saingy androany izahay eto hiresaka karazana valisoa hafa - iray izay afaka manampy anao maka mitaingina lamasinina bebe kokoa ary jereo ny velaran-tany malalaka kokoa noho izao tontolo izao na ny fomba fanaovana traikefa nahafinaritra kokoa noho ny tetibola. Izy ireo dia karazana valisoa nomen'ny orinasan-tsoratry ny carte de crédit. Ary ny fanangonana azy ireo dia mety ho tetika mahomby amin'ny famatsiam-bola ny vakansy nofinofisinao ho raisina.
1. Ahoana no fomba hanaovana fitsangatsanganana an-dalamby na dia sariaka kokoa aza: Tsy mitovy ny carte de crédit amin'ny dia
Matetika ny olona dia mitazona carte de crédit nentin-drazana ao anaty poketrany noho ny antony roa. Indraindray isika mitondra carte de crédit mba hialana fotsiny amin'ny fananana vola be ao am-paosintsika - fomba fanao mety hampidi-doza, indrindra rehefa mandeha isika. Ny carte de crédit koa dia manampy antsika handoa ny fividianana entana izay tsy zakanay rehetra indray mandeha, na ilaina izany na mahasoa. Io fomba fanao voalohany io dia fomba tsara indrindra hampiasana trosa fandehanana. Raha ny tena izy, ny fomba tsara indrindra ahazoana valisoa amin'ny carte de crédit dia dia ny fampiasana azy matetika, indrindra ho an'ny fividianana lehibe. Saingy ny fampiharana faharoa dia mety hampidi-doza rehefa mampiasa carte de crédit amin'ny dia. Nahoana? satria, raha ny salan'isan'ny zana-bola ampiasain'ny indostrian'ny carte de crédit amin'ny ankapobeny - ary mety ho hitanao fa kely kokoa ny sarany amin'izany 14.52%, ny carte de crédit sasany dia miakatra hatrany amin'ny 25%. Ary maro no miantoka sarany be isan-taona ambonin'izany. Ny fitondrana fifandanjana ambony amin'ny carte de crédit dia dia hampihena ny zana-bolanao mandritra ny fotoana fohy. Ka ny fitsipika voalohany amin'ny fampiasana ny carte de crédit dia tsy tokony handoavana bebe kokoa amin'izany mihoatra ny azonao atao ny mandoa vola amin'ny volavolan-dalàna iray..
2. Ny tombony azo amin'ny fampiasana carte de crédit amin'ny dia
Ny orinasan-tsoratry ny carte de crédit dia maniry ny hanana orinasa. Mifaninana amin'ny orinasa hafa izy ireo hahazoana izany. Ny fanolorana programa valisoa tsy manam-paharoa sy matanjaka no fomba lehibe hanavahan-dry zareo ny tenany eo amin'ny tsena sy hisarihana ny mpanjifa.
Perks no mitantana ny gamut. Ny orinasa sasany dia manome anao valisoa amin'ny kilaometatra matetika. Andao lazaina fa New Yorker ianao dia mikasa ny hanao fitsidihana fitsidihana an'i Bordeaux, ny ampahany voalohany amin'ny dianao dia mety sidina mankany Paris - izay mety ho ny fandaniana tokana lehibe indrindra amin'ny dia. (Raha tsy hoe manandrana vintage tena tsy fahita firy ianao!) Ny kilaometatra manidina matetika azonao dia afaka mividy izany tapakilam-piaramanidina ho anao izany. Ny orinasan-tsoratry ny carte de crédit sasany dia misy ny tapakila mpiara-dia isan-taona ao anatin'ny rafitry ny valisoa azon'izy ireo, hahafahanao mitondra namana miaraka amin'ny traikefa nahafinaritra. Ny orinasa hafa dia manolotra valisoa izay mety hahatonga ny sidinao ho mahafinaritra kokoa, manomboka amin'ny fanavaozana ny kilasy voalohany ka hatrany amin'ny fidirana manokana amin'ny tobin'ny seranam-piaramanidina manerantany amin'ny seranam-piaramanidina. Ny fihenam-bidy amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana koa dia miavaka amin'ny rafitry ny valisoa amin'ny carte de crédit sasany.
3. Ahoana no fomba hanaovana fitsangatsanganana an-dalamby na dia sariaka kokoa aza: Ny safidintsika amin'ireo perks
Ny tombam-bidy azo zahana indrindra azonao atao dia ny vola amin'ny fividiananao. The carte de crédit fitsangatsanganana tsara indrindra vola 2% avereno ny fividiananao rehetra. Ny sasany mampiakatra ny isan-jaton'ny famerenam-bola hatramin'ny 6% amin'ny sokajy voafantina, ao anatin'izany ny sidina fiaramanidina, fisakafoana, ary ny fividianana trano fandraisam-bahiny. Raha mampiasa matetika ny carte de crédit amin'ny dia ianao - eny fa na dia handoavana entana isan'andro toy ny enta-mavesatra sy entona aza- dia afaka miakatra haingana ny valisoa ary ampiasaina hanefana ny fandaniana amin'ny dia tianao, ao anatin'izany ny pasinao manaraka. Fa indray mandeha indray, misy dikany ihany ny fampiasana ny carte de crédit amin'ny dia toy izao raha vonona ny handoa ny fifandanjanao isam-bolana ianao.
4. Torohevitra momba ny fisafidianana karatra momba ny dia
Matetika ny carte de crédit dia mampiasa karazana rafitra teboka mba hikajiana ny valisoa azonao ary mazàna sarotra ireo rafitra ireo. Ankoatry ny, ny karatra sasany dia mametraka takiana fividianana farafaharatsiny fividianana vola alohan'ny ahafahanao mahazo isa mihitsy. Ohatra, mety takiana aminao ny hanao a $1000 na mihoatra amin'ny fividianana mandritra ny telo volana alohan'ny hanombohanao mahazo isa. Ny fametrahana tapakila fiaramanidina amin'ny carte de crédit amin'ny dia dia fomba mora hihaonana amin'ny kely indrindra. Saingy azonao atao ihany koa ny mamaly azy amin'ny fampiasana ny karatrao mandritra ny volana vitsivitsy handoavana ny fandaniana isan'andro. Aza adino ny manamarina ny fividiananao mba hahazoana antoka fa eo an-dàlana isam-bolana ianao hahatratra ny tanjon'ny fandanianao.
Ny filanao tsara indrindra dia ny mampitaha ireo karatra tsirairay eritreretinao ho an'ny paoma. Azonao atao ny mamorona takelaka ho an'ity tanjona ity hahazoana antoka fa misambotra ny fiasa rehetra amin'ny karatra tsirairay ianao ary manao fampitahana ara-drariny. Aza hadino ny mampiditra APR mahaliana, fividianana farafaharatsiny fividianana, vola isan-jato, ary ny sarany isan-taona ny sarany amin'ny karanao amin'ny kajy anao.
5. Ahoana no fomba hanaovana fitsangatsanganana an-dalamby na dia sariaka kokoa aza: Torohevitra farany iray
Wanderlust dia mety ho fanentanana tsy hay tohaina. Amin'ny maha-manam-pahaizana momba ny dia, manentana anao izahay hampiasa am-pitandremana andraikitra. koa, mangataka aminao izahay handinika ny andraikitranao amin'ny planeta. Manao safidy safidy izay misy fiatraikany ratsy amin'ny tontolo iainana, toy ny Nandeha lamasinina fa tsy amin'ny fiara mba hijery ny toerana halehanao manaraka, dia fomba iray hivezivezena nefa marina amin'ny fitsipiky ny faharetana.
eto amin'ny Save A Train, we will be happy to help you plan your vacation in Europe by train.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Ahoana ny fomba hanaovana traikefa an-dàlam-by na dia mora vidy kokoa” amin'ny tranokalanao aza? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url =ny https://www.saveatrain.com/blog/train-adventure-budget-friendly/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, ho hitanao ny zotram-piaranay malaza indrindra - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / andehilahy ny / en na / de sy ny maro hafa fiteny.
Susan Doktor dia mpanao gazety sady mpanao tetikadin'ny tetik'asa izay avy any New York City ary nitety lamasinina be dia be. Manoratra lohahevitra maro be izy, ao anatin'izany ny ara-bola, Tsangatsangana, sy sakafo sy divay. Follow her on Twitter @branddoktor or you can click here to antsoy aho
Ahoana no To Stay Safe rehefa nitondra fiara handeha Nandritra Winter
Torohevitra toro-lalana amin'ny fiara, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Travel Denmark, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Switzerland, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe